IMarble Inn Resort-Amagumbi amabini okulala eCondo kuMgangatho ophantsi - I-Airbnb
IMarble Inn Resort-Amagumbi amabini okulala eCondo kuMgangatho ophantsi
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uJoe iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Condo enamagumbi amabini okulala
Igumbi lokuhlala elibanzi elinendawo yokulala enegumbi lokulala elikhulu, igumbi lesibini lokulala, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela ezimbini. Igumbi lokulala elikhulu libonisa ibhedi enkulu yokumkanikazi, iTV yescreen esicaba kunye negumbi lokuhlambela eline-air jetted tub. Igumbi lokutyela lincamathele kwikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nomgangatho wokufudumeza omenyezelayo ukuze uhlale upholile kwiinyanga ezipholileyo zasebusika. Indawo yokuhlala edibanayo inika indawo yokuhlala ezine ezinezitulo ezibini zesikhumba kunye nesofa enye yokutsala.
Iibhedi ezi-2 zikaKumkanikazi kumagumbi okulala ahlukeneyo
2 amagumbi okuhlambela
Imiswe elunxwemeni loMlambo i-Humber kunye nomgama wokuhamba ukuya kwiNtaba yeMarble, i-adventure iqala kwiMarble Inn Resort. Chitha usuku siphosa umgca kwiidokhi zethu, sihamba kufutshane neendlela, sibheqa kwiingxangxasi ezincinane okanye sityibiliza kwiNtaba yeMarble kwaye sivumele abasebenzi bethu ukuba banyamekele abanye. Into ekufuneka uyenzile kukuhlala emva kwaye wonwabele umbono.